[14 / 02 / 2020] Baahida Baahsan ee ka socota Yurub ee Gawaarida Jaban ee Guryaha	58 Sivas
[14 / 02 / 2020] Khadka Tooska ah ee Isbitaalka Taranka ee Magaalada Kocaeli wuxuu socodsiiyey qorshayaasha	41 Kocaeli
Maalinta: Febraayo 7, 2020
Ahaanshaha xayawaan rabaayad ahi waa muhiimad weyn marka loo eego qaybinta dareenka jacaylka. Fikradda ah in waxkasta oo nool ay qiimo leeyihiin ayaa ah faahfaahinta helitaanka xayawaannada. Si kastaba ha noqotee, ugu fiicnaanta bixinta bey'addan tayada leh [More ...]
Boqortooyada UK waxay go’aansatay inay sameyso isku-dheellitir cusub sababtuna tahay kororka badan ee ku yimaadda khidmadaha gaadiidka dadweynaha ee aan is baddelan illaa 3 sano. Dakhliga cusub ee la hirgalin doono Isniinta, Febraayo 10; tigidh elektiroonig oo buuxa [More ...]
museum kaliya Turkiga taas oo ah mid ka mid ah taasoo keentay museum tareenka iyo uumi ah tareenka Yurub waxa uu ku yaalaa tuulada degmada Selcuk of summerhouse Izmir, awelna loola ee dalxiisayaasha gudaha iyo dibadda. Çamlık oo ku taal degmada Selçuk ee İzmir [More ...]
Bishii Janaayo 17, 2020, macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay bilaabeen inay codsiyo u diraan degmooyinka waaweyn ee Ankara iyo Izmir, markii ay soo wacaan Shabakadda Isku-xidhka Macallimiinta Khaaska ah. [More ...]
Dawladda hoose ee Ordu, oo iyadu hormuud ka ah mashaaricda himilo u keeni doonta magaalada, mashruuca "Atatürk Park Sea Star" ee u dhexeeya Midi Restaurant iyo Teleferik Sub Station si xeebta xeebta uga dhigto mid waxtar badan. [More ...]
Lambarka tareenka 44015, oo ka dhiga safarka Eskişehir Konya, wuxuu qaybiyaa rooti u dhaw magaalada Sülümenli ee Afyon wuxuuna isku dayayaa inuu wadada ka gudbo isaga oo jabaya caqabadaha halka caqabadaha ay xirayaan heerka goynta. [More ...]
Waxaa ku guuleystey qandaraaska dayactirka weyn ee shirkadda tareenka ee Hindiya Larsen iyo Toubro (L&T) Etihat Rail. Etihad Rail, waa shirkadda rasmiga ah ee tareenka ee Imaaraadka Carabta, waxay maamushaa xamuulka xamuulka iyo rakaabka [More ...]
Si kor loogu qaado safarka masaafada gaaban ee ka socda 2.60 TL illaa 3.50 TL ee basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay, IETT, metro iyo metrobus-ka canshuuraha ee Xarunta Isku-duwaha Gaadiidka ayaa lagu qabtay Xarunta Isku-duwidda Musiibada ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay ka waddaa shaqo ka hortaga halista ah ee gawaarida xamuulka dadweynaha oo ay wataan tobanaan kun oo qof maalin walba. Kooxo xiriir la leh Waaxda Ilaalinta iyo Xakamaynta Deegaanka ee Magaalada Konya ee Magaalada, ayaa kor u kaca hargabka iyo faafa [More ...]
Shilalka ku lugta leh taraamyada ku shaqeeya wadada Bağcılar Kabataş waxaa duubay kaamirooyin. Gawaarida u adeega kumanaan kun oo qof maalin walba waxay yeelan karaan shil waqti ka waqti. Marmarka qaarkood taraamyada gawaarida isku dhaca mararka qaarkood [More ...]
Ururka Guryaha Farshaxaneyaasha iyo Farshaxanka ee ku sugan Istanbul ayaa ku dhawaaqay in go'aan boqolkiiba shan ka mid ah lagu gaaro Istanbul. Safarka ayaa la filayaa inuu dhaqan galo ka dib markii la saxeexo masuuliyiinta ay khusayso. Isuduwidda Gaadiidka Xarunta Isku-duwista Musiibada ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul [More ...]
Kuwa raadinaya shaqo Eskisehir, Estram Light Rail Systems, oo ka mid ah xiriiriyeyaasha Degmooyinka waaxda viaKUR. 48 xayeysiisyada shaqaalaysiinta waxaa daabacay. Sida lagu sheegay bayaanka, ugu yaraan 1 sano ayaa khibrad leh [More ...]
Erkan Yağcı, Madaxweynaha Midowga Shaqaalaha Dalxiiska Dalxiiska ee Mediterranean, wuxuu soo jeediyay in loo weeciyo nidaamka tareenka ee u dhexeeya Alanya iyo Antalya si dalxiisayaashu uga baxaan hoteelkooda oo ay u aadaan xarumaha magaalada. Alanya Madaxweynaha Horumarinta Dalxiiska Dalxiiska (ALTAV), oo qiimeynaysa soojeedinta Yağcğ [More ...]
Gaadiidka Magaalada Kocaeli ee Magaalada KobaneliPark waxay abaabuli doontaa duulimaad dheeri ah oo loogu talagalay darbiga magaalada, kaasoo ku kulmi doona Kocaelispor iyo Belediye Derincespor garoonka Kocaeli maalinta Axada, 9ka Febraayo 13.30. GAADIIDKA KÖRFEZ oo leh 150 KS [More ...]
Nord wuxuu dhaqaaqay Dhismaha Qorraxda Koowaad ee Dunida ee Laydhka Laydhka ah!
Baabuur wadida Tijaabada ah waxay kusii socotaa Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line